Apple neNiantic iripo Pokemon Enda kune iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Apple neNiantic iripo Pokemon Enda kune iyo Apple Watch
Nezuro, mushure me avalanche yenhau dzemireza Kubva kukambani yeCupertino, iPhone7 uye 7 Plus, pamwe neiyo yakamirirwa kwenguva refu Apple Watch nhepfenyuro 2, tinogonawo kuona tariro netariro uye zvidiki zvidiki mumaawa anodarika maviri enguva.
Mumashoko makuru iwayo, ayo akaitirwa muhoro Bill Graham, muSan Francisco, yakaratidza zvimwe zvinyorwa zvitsva, senge mutambo mutsva we Mario Bros (Mario Bros Mhanya)futi nhau dze Pokemon Go. Mushure mekutaurwa kupfupi naTim Cook, Jeff Williams, muvambi uye Niantic CEO, akakwira padariro. With John Hanke, yakaratidza zvakadzama nezve inotevera inotevera kufamba kune uyu muhombe mutambo: chishandiso chitsva cheApple Watch.
Neiyi nzira, kubva zvino zvichienda mberi tinogona kutamba uno unozivikanwa mutambo chero kupi pasi tichishandisa wachi yedu chete, tisingafanirwe kubvisa nharembozha yako kubva muhomwe yako.
Kubva pairi, unogona kufukidza mazai, ukaona pokemoni iri padyo, kuyanana neakasiyana "pokeparadasas" atinowana munzira yedu, uyezve kuziva chinhambwe chakafambiswa neicho chikumbiro. Zvese kubva pachiuno chedu.
Kubva pachiratidziri chikuru chekushandisa, iwe unogona zvakare kuona iwo mazinga eimwe neimwe pokemoni ari chikamu cheboka redu, pamwe neXP. Tinogona kuona chinhambwe chakafambiswa netsoka, pamwe nemakoriori akashandiswa panguva yekuita. "Pasina kupokana, nzira yekukurudzira mutambo kune vanogara zvakanyanya", - akadaro vavaki vayo.
Iyo chete yekumusoro pasi kuenda Pokemon Go - ikozvino - ndizvo izvo Hatizokwanise kubata pokemoni dzatinoona neWatch yacho pachayo, pane izvi isu tichiri kufanira kutora Smartphone yedu. Nekudaro, iyo yakapusa chokwadi yekuona iyo pokemon iri padyo nesu ichave yatove yakasarudzika.
Sezvakataurwa ne Hanke mune Keynote kupfuura:
"Ichi chinhu chitsva chichava paApple Watch, pamwe neyekuvandudza kune iyo iPhone app, gore risati rapera."
Unogona rewatch Keynote pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple neNiantic iripo Pokemon Enda kune iyo Apple Watch
Kana iwe uchida kutenga iyo Apple Tarisa apa ndizvo zvese zvaunoda kuti uzive
Usabhenekera kana kuti iwe ucharasikirwa neiyi 107 yechipiri pfupiso yenhaurwa